Kulan lagu soo afjarayo colaad oo maanta lagu qabanayo deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Kulan lagu soo afjarayo colaad oo maanta lagu qabanayo deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud!!
Kulan lagu soo afjarayo colaad oo maanta lagu qabanayo deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud!!
Jan 13, 2017WARAR
Kulan lagu soo afjarayo colaad ka dhex jirta beelo wada dega deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto deegaanka Gadoon.
Mas’uuliyiin ka socotay maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa suurtogashay inay kulamo la yeeshaan waxgaradka iyo nabadoonada deegaanka Gadoon waxaana ay ku guuleysteen inay xabad joojin dhex dhigaan dad ee colaad kala fogaysay.
Khilaafka ka jira deegaanka Gadoon oo sababay in qoysas badan barakacaan ayaa waxaa wafdi uu horkacayo Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Maamulka Galmudug Axmed Mire Cali ee ku guuleysteen kadib markii ay garab ka heleen oday dhaqameedyada deegaanka in la kala qaado maleeshiyaad is horfadhiyay.
Khilaaf u dhexeeya labada beel ayaa sababay in ay ku dhinteen afar ruux dhowr kalana ku dhaawacmeen. Kulanka maanta ka dhacaya deegaanka Gadoon ayaa lagu wadaa in lagu soo afjaro colaada deegaankaa ka jirta.
Colaadan ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli abaar daran ay ka jiro deegaano ka mid ah gobolada dhexe ee dalka iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Abaarta ayaa waxaa loo sababaynayaa Roobkii lasugaayay oo di´in iyo Markuu roobka da´ay ama dhul waraabka Wabbiyadda oo aan laga geedsan Cawsas iyo Balal oo ay cuni laahyeen Xoolahayna Soomaaliya
Previous PostBaarlamaanka Nigeria oo taageeray in megengelyo la siiyo madaxweynaha Gambia!! Next PostDAAWO: Faysal Waraabe oo ka hadlay Saldhiga Imaaraadku Doonayo “Dalka Itoobiya ma leh, ee anagaa leh”!